Ivan di Medjugorje: la Madonna ci dice l'importanza dei gruppi di preghiera | PREGHIERA&NEWS
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 8, 2020 Ọktoba 8, 2020
Anyị na-amatawanye na ìgwè otu ekpere bụ ihe ama nke Chineke maka oge anyị bi na ya, ma dịkwa oke mkpa maka ụdị ndụ anyị ugbu a. Mkpa ha na Churchka taa na ụwa taa bụ nnukwu ihe! Uru otu ekpere di doro anya. Ọ dị ka a naraghị otu ekpere dị na mmalite ha jiri ntụkwasị obi nabata, na na ọnụnọ ha welitere obi abụọ na enweghị obi abụọ. Ma taa, ha na-abanye oge emeghe ọnụ ụzọ ha wee tụkwasara ha obi. Otu dị iche iche na-akuziri anyị ịrụ ọrụ nke ọma ma gosi anyị mkpa anyị ikere. Ọ bụ ọrụ anyị isonyere otu ekpere.
Otu ekpere na-akuziri anyi ndi nzuko uka a gwara anyi kemgbe; otu esi ekpe ekpere, otu esi ehibe ya, yana otu ị ga - esi bụrụ obodo. Nke a bụ naanị ihe mere otu nzukọ ji ezukọ na nzukọ, naanị nke a, anyị ga-ekwere ma chere. Na mba na obodo anyi, na obodo ndi ozo nke uwa, anyi aghaghi ime ka ha nwee otu onu ka otu ekpere wee di ka otu ekpere nke uwa na ulo uka nwere ike iru, na-enwe obi ike na ha nwere otu ndi no na-ekpe ekpere. .
Taa a na-agbaso echiche dị iche iche ma na n'ihi nke a anyị nwere ụkpụrụ omume ọma. Ya mere obughi ihe ijuanya na nne anyi nke bi n’elu igwe jiri nnwe obi di uku were obi ya niile gbaa anyi ume, “Kpee ekpere, kpekuo, umu m.”
Ọnụnọ nke mmụọ nsọ na-ekpe ekpere. Onyinye nke Mo nso n’eme ka obi anyi bia site n’ekpere anyi, nke anyi ji emeghekwa obi anyi ma kpo Mmuo Nso. O gha aghacha doo anya n’uche na n’obi ike nke ekpere, ụdị ọ bụla ọ dị - ekpere nwere ike ịchebe ụwa pụọ ​​na nhụsianya - nsonaazụ ojoo. Yabụ na mkpa imepụta, n'ime Chọọchị, ọtụtụ ndị na-ekpe ekpere, ọtụtụ ndị na-ekpe ekpere na onyinye nke ekpere na-agbanye mkpọrọgwụ n'ime obi niile na Churchka. Otu ekpere di iche-iche n’uwa nile bu azaa ha bu oku nke Mmuo Nso. Naanị site n’ekpere ka ọ ga-esi kwe omume ịchebe mmadụ nke oge a na mpụ na mmehie. Maka nke a, otu ekpere di iche iche aghaghi ibu ndi mmadu inwe obi uto ka ekpere ha wee buru uzo meghere ha ka ha mee ka mmuo nso puo, ka ewe wusi Ya n’elu uwa. Otu ekpere aghaghi ikpe ekpere maka ulo a, maka uwa, na ike nke aka ya iji luso ihe ojoo gha juputara ulo oru nke taa. Ekpere gha aburu nzọpụta nke ndi nke ugbu a.
Jizọs kwuru na ọ nweghị ụdị nzọpụta ọzọ maka ọgbọ a, na ọ nweghị ihe ga - azoputa ya ma ọ bụghị ibu ọnụ na ikpe ekpere: Jizọs wee sị ha: “Apụghị ụdị mmụọ ọjọọ a ụzọ ọ bụla, belụsọ ma ibu ọnụ na ekpere. . " (Mak 9: 29). O doro anya na Jizọs anaghị ekwu maka naanị ihe ike dịịrị ndị mmadụ n'otu n'otu kama ọ bụ ihe ọjọọ n'obodo niile.
Otu ekpere adighi adi ka o mee ka otutu ndi kwere ekwe zukota onu; mana ha na-eti mkpu ngwa-ngwa ọrụ nke onye-nchụ-aja na onye ọbụla kwere ekwe isonye. Ndị otu ekpere ga-emerịrị mkpebi nke igbasa Okwu Chineke, tụgharịa uche na mmepe na uto ime mmụọ ha. Enwere ike ikwu otu ihe banyere nnwere onwe nke isonye na otu ekpere, ebe obu ihe di nkpa, oru nke Mo Nso na amara nke Chineke O nyeghi ya iwu obula kama onyinye nke amara nke Chineke. ọrụ. Obu ihe ekwesiri iburu n’obi nihi na inata ihe omimi banyere amara nke Chineke.
Ndi otu obula aghaghi ime ka mmuo puta ihe diri onye ya, na ezinulo, n’ime obodo, wdg ma site n’ike na ike n’ariri Chineke o gha aghata ogwu nke Chineke n’ime ahuhu nke taa - ahu ike nke Chineke: Udo dị n’etiti ndị mmadụ, nnwere onwe pụọ n’ihe ize ndụ nke ịdakwasị ihe ike, nwetaghachi ahụ ike nke ike omume, udo nke mmadụ na Chineke na onye agbata obi.
EGO esi ebido n’otu ekpere
1) Ndi otu ndi otu ekpere nwere ike ichikota na Nzuko, na ulo nke aka ha, n'èzí, na onodu - ebe o bula udo na olu nke uwa ghara inwe. Otu onye nchụ aja na onye nkịtị kwesịrị ka edobere ya n’otu oge ha nwere mmepe ime mmụọ siri ike.
2) Onye isi otu kwesiri igosiputa nzube nke nzuko a na ebumnuche ya inweta.
Ihe ato ato ichota otu nmekorita bu nzuko nke madu abuo ma obu ato ndi nwere mmetuta nke ike ma nwekwa ike igbasa ha n'ihi na ha kwenyesiri ike na ya. Ekpere ha maka uto ha ga-adọta ọtụtụ ndị ọzọ.
4) Mgbe otu ndi mmadu choro ijikota onu na ochicho nke ikerita echiche ha, ikwu okwu banyere okwukwe ahu, igu akwukwo nile, ikpe ekpere maka inye nkwado na njem nke ndu, imuta ikpe ekpere, ihe ndia bu ihe ndia enwere otu ekpere.
Zọ ọzọ kachasị mfe ịmalite otu ekpere bụ ịmalite isoro ezinụlọ anyị kpee ekpere; ọbụlagodi ọkara elekere kwa anyasị, nọdụ ọdụ ma kpee ekpere. Ihe ọ bụla ọ bụ, enweghị m ike ikwere na nke a bụ ihe agaghị ekwe omume.
Inwe onye nchu aja dika onye isi otu n’enye aka nke uku. Ijikwa otu onye ubochi taa, odi nkpa ka onye ahu nwee nnuku ime mmụọ na amamihe. Yabụ na ọ ka mma inwe ụkọchukwu maka iduzi, onye ga-aba uru ma gọzie ya. Ọnọdụ ya na-eduga na-enye ya ohere izute mmadụ niile na imeziwanye uto ime mmụọ ya, nke na-eme ka ọ bụrụ onye ndu kacha mma nke Churchka na obodo. Ọ baghị uru ka onye ụkọchukwu kekọta onwe ya n’otu ìgwè.
Maka otu a ịga n'ihu dị ezigbo mkpa ịghara ịkwụsị ọkara. Nọgidesie ike - nọgidesie ike!
Ekpere bu uzo anyi n’eduba anyi na omimi nke Chukwu Maka ekpere bu Alfa na Omega - mmalite na njedebe nke ndu ndi Kraist.
EKPERE diri nkpuru obi. Igwe n’anụ ahụ mmadụ na-anwụ. Taa Nwaanyị anyị na-ekwusi ike mkpa ekpere. N'ime ozi ya niile, Nwanyị nwanyị na-ebu ụzọ ekpe ekpere, anyị na-ahụkwa ihe ịrịba ama ya na ndụ kwa ụbọchị. Ya mere, mmadu apughi ibi ndu n’ekpeghi ekpere. Y’oburu n’onyinye onyinye nke ekpere, ihe anyi n’efu bu - uwa, nzuko a, anyi. Enweghị ekpere, ọ nweghị ihe fọdụrụ.
Ekpere bu ume nke nzuko uka, anyi bu Nzuko a; anyị bụ akụkụ nke Nzukọ-nsọ, ahụ nke Nzukọ-nsọ. Etuosi nke ekpere obula di n’ime ochicho nke ikpe ekpere na n’ime mkpebi ikpe ekpere. Thzọ nke na-ewebata anyị n’ekpere bụ ịmara etu anyị ga-esi hụ Chineke karịa n’ọnụ ụzọ, kwupụta mmejọ anyị, rịọ mgbaghara, chọọ ime ka anyị kwụsị ime mmehie na ịchọ enyemaka iji zere ya. Ikwesiri inwe ekele, ikwupute, "Ekele!"
Ekpere yiri mkparịta ụka ekwentị. Iji kpọtụrụ kọntaktị ị ga-ebulite onye nata gị, pịa nọmba ahụ wee malite ikwu okwu.
Idobe ekwenti ahu na ime mkpebi ikpe ekpere wee buru onu ogugu ndi ahu. Mbupute nke mbu nwere mgbe niile ịhazi onwe anyị na ịchọ Onyenwe anyị. Nọmba nke abụọ na-anọchi anya nkwupụta nke mmebi iwu anyị. Nọmba nke atọ nọchiri anya mgbaghara mmehie anyị n’ebe ndị ọzọ nọ, n’ebe anyị onwe anyị nọ ma ọ bụ n’ebe Chineke nọ Nọmba nke anọ bụ agbahapụ n’aka Chineke, na-enye ihe niile iji nata ihe niile ... Soro m! Enwere ike ịchọpụta inye obi ekele na nọmba nke ise. Kelee Chineke maka ebere Ya, maka ịhụnanya Ya maka ụwa niile, maka ịhụnanya Ya niile nye m na onyinye nke ndụ m.
N'inwe mmekorita nkea, ugbua onye puru isoro Chineke kwurita Nna.
Nke gara aga Post Gara aga post:Nkwupụta nke ụbọchị: omume ọma
Next Post → Post ozo:Chee echiche taa ot today u mkpebi siri ike i siri merie mmehie di omimi